Usoro na Ọnọdụ N'ihi Daashi atụ ogho Thursday |
Usoro na Ọnọdụ N'ihi Daashi atụ ogho Thursday
Nke a nkwalite ga-abụ n'etiti 00:01 na 23:59 on 4th, 11nke, 18nke, 25nke January 2018.
GMT bụ Ẹkot ACST -8.30hrs, PTZ + 8aka elekere
Ndị na-esonụ bonuses dị:
Nkwụnye ego n'etiti £ 10 & £ 19 na-enweta a bonus of 10 ego spins.
Nkwụnye ego n'etiti £ 20 & £ 49 na-enweta a bonus of 20 ego spins.
Ịkwụnye £ 50 ma ọ bụ n'elu-enweta a bonus of 50 ego spins.
Nke a nkwalite ga na--nti na gị mbụ nkwụnye ego nke na ụbọchị.
Free spins nwere ike na- 3 -arụ ọrụ ụbọchị site na njedebe nke nkwalite ka-otoro na akaụntụ gị. Ọ bụla winnings si spins na-ọdịda na daashi ego.
Ego ego na-ebu a wagering chọrọ 30x nchikota nke gị mkpa bonus ego na a ga-zutere tupu ọ bụla winnings na-ghọrọ ka capped ego.
Daashi ego akwụ site na nke a nkwalite, nwere ike na-eji na na na ụfọdụ oghere egwuregwu.
4x Nchigharị: kacha akakabarede ego si bonus ego ego ga-capped na 4x na bonus ego ọdịda. Daashi ego tọghata akpaghị aka otu ugboro wagering zuru ezu.
Ozugbo ihe si n'aka gị ego na-anọgide irè n'ihi na 28 ụbọchị. I kwesịrị ghara mezue wagering chọrọ na oge a, fọdụrụ bonus ego ga-ewepụ akaụntụ gị.
Ego ego hapụrụ na-enweghị ike na-eji ndị na-esonụ egwuregwu: Dracula, Egbe 'N’ Roses, Jimi Hendrix, Chineke Fortune, The Invisible Man, Isle O'Plenty, Gong nke Iri na Otu Fa cai, More Enwe, Genie jackpots, ikpe ziri ezi League, Batman, Superman, The Flash, green Marina Die, Otu Mbubịteyo na Holly Madison, emetụta akparamàgwà, James Dean, The Ezi Wizard, Thunderstruck II, Baccarat, Blackjack, nwamba, Chilli Gold, European ruleti, Mfep of Sparta, Golden, Ozodimgba Go Wild, Hi-Low Blackjack, Hi-Low-agba chaa chaa, nko dike, Jackpot Jester Wild chitụ, JJ50K, Live Baccarat, Live Blackjack, Live ruleti, Kechioma Larry Lobstermania, MegaJackpots Cleopatra, Megajackpots Siberia Oké Ifufe, Megajackpots Star lanterns, Megajackpots Wolf Run, Monster enweta nkwanye, Motorhead, American ruleti, Blackjack Classic, Oasis Poker, Pontoon, Texas Holdem, Paws nke oké iwe, Planet nke apes, Nzuzo nke Atlantis, Ohere mepere-o-Gold, atụ ogho mgbaasị, Starmania, Steam Tower, Super Diamond Deluxe, Super Spinner, Top Cat, Ultimate X Five Play Poker, Vikings nke Fortune, Winstar, Wolfpack, Worms na Harley Davison Freedom Tour.
Player na-eti na naanị otu bonus nwere ike nọ n'ọrụ n'otu mgbe, biko gaa na “My profaịlụ” ngalaba na-ele gị dum bonus kwụ n'ahịrị
Standard Okwu & ọnọdụ ide.
Management mkpebi bụ ihe ikpeazụ N'ọnọdụ nile.
Biko chaa chaa akpọrọ. Gaa Leta www.begambleaware.org maka ozi ndị ọzọ.
Usoro na ọnọdụ nke mmeri gburugburu
Usoro na ọnọdụ nke Kpara spins dobe
Usoro na Ọnọdụ – Bonanza Mega Match